Dhakhtarka xulka Brazil oo warbixin ka soo saaray dhaawaca Coutinho – Gool FM
Dhakhtarka xulka Brazil oo warbixin ka soo saaray dhaawaca Coutinho
Byare November 8, 2017
Philippe Coutinho during the UEFA Champions League match between NK Maribor and Liverpool FC at Station Ljudski Vrt on October 17, 2017 in Maribor, Slovenia. Photo by Damjan Zibert (Photo by Damjan Zibert/NurPhoto via Getty Images)
(Brazil) 08 Nof 2017. Kubbad qaabeeyaha Liverpool Philippe Coutinho ayaa la midoobay xulka Brazil inkastuu qabo dhaawac muruqa ah.
Dhakhtar xulka Brazil ayaa daaha ka rogay inaysan jirin fursad uu laacibka uga qeyb qaadan karo kulanka saaxiibtinimo ay jimcaha la yeelan doonaan xulka Japan balse uu ka soo muuqan karayo kulanka Talaadada ay Wembley kula ciyaari doonaan xulka England.
“Coutinho wuxuu qabaa dhaawac muruqa ah ee bowdadiisa bidix,” Dr. Rodrigo Lasmar ayaa sidaa yiri.
“Fursada uu ku ciyaari karo kulanka Japan waa mid aad u yar, laakiin waxaan ka shaqeynaynaa sidii loo heli laa kulanka England.”.
Warkan ayaa farxad galinaya Liverpool maadaama uu xiddigooda ka maqnaa saddexdii kulan ee ugu dambeeyay.
Cristiano Ronaldo oo aad uga carreysan Isco